Tilmaamaha Khariidadaha Tareenka ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Tilmaamaha Khariidadaha Tareenka ee Yurub
Waxaan si adag u aaminsan yihiin in safarka tareenka waa midka ugu wanaagsan uguna badan siyaabo eco-saaxiibtinimo oo loo safro. Si taas loo gaaro, waxaan isku dubaridnay ku dhawaad ​​labo iyo toban wadayaasha tareenka kala duwan si aan kuugu keeno tikidhada tareenka ugu fiican uguna jaban guud ahaan Yurub. Tan macnaheedu waa waxaan ku siin karnaa boqolaal ikhtiyaar oo ah khariidadda wadooyinka tareenka.
Laga bilaabo Eurostar-xawaare sare ilaa tareenka hurdo la taaban karo wadooyinka, our mar walba waxaan ku qaataan helidda qiimaha ugu fiican si aad u ma aha inay. Si taas loo gaaro, waxaan u abuurnay maqaal hagista khariidad waddo tareenka kaa tusinaya qaar ka mid ah jidadka tareenka ugu caansan. Kuwaas waxaa ka mid ah safarada London iyo Paris, Florence si Rome, iyo meel kasta oo u dhexeeya.
Haddii aadan arki karin rugtaada – ha ka welwelin! iskaashi Our noo oggolaan in aad ka heli tigidhada kala duwan ee khadadka tareenada kala duwan – wadooyinka maxaliga ah, xiriirada caalamiga ah, iyo kuwa ugu wanaagsan ee ku socda xawaaraha xawaaraha sare waa lagu soo daray.
Sidaas naftaada ka heli qaar ka mid ah waxyi safarka, iyo marka aad diyaar u tahay, u gudub boggayaga raadinta si aad u hesho tikidhada tareenka ugu fiican uguna raqiisan!
Tareen Gaadiidka Ma The Eco-Friendly Jidka Si Safarka. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Websaydhka Adduunka.
Tusaalayaasha Wadooyinka Muhiimka ah ee Wadooyinkeenna Ugu Caansan:
1. Tareeno ka socda London St Pancras International ilaa Paris
Tareenka ka baxa London ilaa Paris waa midka ugu dhaqsaha badan Yurub. Waxaa maamula Eurostar, Waxaad naftaada ka heli kartaa Boqortooyada Midowday ilaa Faransiiska laba saacadood iyo lix iyo toban daqiiqo gudahood. Taasi waxay ku siineysaa waqti ka badan intii aad ku seexan lahayd, qaado tareenka kuna raaxee a safarka maalin ee caasimada Faransiiska. Soo qaado baguette oo wareegaa Louvre – ama si fudud ugu raaxeysto quruxda Paris oo dhan inay bixiso.
Kaga baxa London St Pancras si joogto ah ayey u dhacaan, iyadoo tareenadu socdaan saacad ku dhawaad. Isla taas ayaa la dhihi karaa soo laabashada Paris ilaa London, iyo dusha sare waxaad kaheli doontaa dhamaan adeegyada sare ee laga filayo wadada tareenka ee dhamaadka-dhamaadka.
Haddii aad ku jirtid tahay in Paris, Waxaad sidoo kale ku safri kartaa jihada ka soo horjeedda, taas oo kugu kalifaysa inaad timaado London aroorta hore hadaad rabto. Waxaad u tagi kartaa SoHo oo aad qaadan kartaa Bandhig Faneed ama si fudud waad ugu raaxeysan kartaa waxqabadka fiidarka. Si kastaba ha ahaatee, tareenka wuxuu bixiyaa dabacsanaan ugu dambeysa xilliyada bixitaanka.
Amsterdam tigidhada Paris
Tikidhada London iyo Paris
Rotterdam ilaa tikidhada Paris
Tigidhada Brussels iyo Paris
2. Tareeno Ka Socda Florence ilaa Rome Termini
Laba ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Talyaaniga, Florence iyo Rome waxay hoy u yihiin boqolaal soo jiidashada dalxiiska nooc kasta oo soo booqde ah. Buffs Art wuxuu u wareegi karaa Vatican-ka si uu ugu qanco Kiniisada Sistine. Cunnooyinku waxay ku raaxeysan karaan qaar ka mid ah buzzalo mozzarella ee ku xeeran. Wax alla wixii dhadhankaaga ah, labadan magaalooyinka Talyaani waa meelo cajaa'ib leh inaad ku qaadato toddobaad ama shan.
xitaa wanaagsan, Tareennada isku xidha Florence iyo Rome waa kuwo badan oo qiimo jaban. Safarku wuxuu qaadanayaa hal saac iyo badh oo waxaad heshay macaashka lagu daray baadiyaha qurxan ee ka baxsan daaqadahaaga.
3. Khadka Khadka: Tareenada Ka Socda Rome ilaa Milan
Horaan uga wada hadalnay Rome, laakiin Milan waa magaalo kale oo cajiib ah oo ku taal Talyaaniga. Sida ay uga duwantahay koonfurta Talyaani sida tufaaxa qumbaha, Milan waa koox casri ah. Waxaa caan ku ah qaab dhismeedkeeda sare iyo dhacdooyinka farsamada sare, magaaladu waa inay joogsataa inta lagu jiro fasaxa Talyaani kasta. In kasta oo cimiladu aysan wali aheyn sidii Badda Dhexe, wali waad ku raaxeysan kartaa qaab dhismeedka quruxda badan iyo xitaa matxaf ama labo waqti kasta oo sanadka ah.
Safarka Rome ilaa Milan wuxuu ka dheer yahay kan Florence. Looma baahna in la baqo, si kastaba ha ahaatee, weli waa saacad iyo badh aad loo maareeyo. Taasi waxay ku siineysaa waqti badan oo aad ku qaadatid raaxaysan muuqaal ah!
Genoa ilaa tikidhada Milan
Tikidhada Rome ilaa Milan
Bologna ilaa tikidhada Milan
Florence ilaa tikidhada Milan
4. Tareeno ayaa ka socda Hamburg ilaa Kobanheegan
A waa fasax kasta oo reer Yurub ah, Hamburg iyo Kobanheegan ma noqon karaan magaalooyinkii ugu horreeyay ee maskaxdaada soo gala dalxiis. Taasi waa ceeb, in kastoo, maxaa yeelay labada magaaloba waxay kuharan yihiin taariikh iyo marinno midabo leh. Hamburg waa deked weyn oo ku taal woqooyiga Jarmalka. Waxaa laga yaabaa inaad hore u maqashay taas oo ay ugu wacan tahay xidhiidh la leh cunno caan ah oo caan ah hamburgers. Dhab ahaantii Fun – dadka ku nool Hamburg waxaa sidoo kale loo yaqaan Hamburgers.
Copenhagen, dhanka kale, waa caasimada Denmark. In kasta oo aad rabto inaad booqato gudaha Xilliga xagaaga ama cimilada qabow daran, wax badan ayaa laga qabtaa magaaladan xeebta. Laga soo bilaabo dhismayaasha midabyo dhalaalaya illaa baararka sinta, Caasimadda deenishka waxkastaba waa laga hadlayaa.
Tareenka u dhexeeya labada magaalo ayaa qaadan doona wakhti. Safaradu waxay socdaan ilaa lix saacadood, sidaa darteed iska hubi inaad keento madadaalo. Taas ayaa la yiri, Tareenadu waa wax casri ah oo leh dhowr duullimaadyo oo la heli karo si aad dib ugu fadhiisatid oo aad ugu degganaanto nabad.
Hamburg si Tareenadu Copenhagen
Hanover in Tareenadu Copenhagen
Berlin si Tareenadu Copenhagen
5. Khadka Khadka: Tareenada Ka Socda Zurich Iyo Bern
Hadaad waligaa dooneysay inaad safarto Alps-ka, ma heli doontid saldhig wanaagsan oo aad wax ku baarto oo aan ka aheyn Zurich iyo Bern. Labaduba waxay ku yaalliin wadanka Switzerland, Magaalooyinkaasi waa saacad keliya via tareenka. In kasta oo laga yaabo inaadan gaarin, Bern waa caasimada Switzerland, ma ahan mid ka mid ah magaalooyinkeeda caan ka ah sida Geneva ama Zurich. Magaalada waxaa ku nool dad kor u dhaafaya hal milyan oo qof waxaana ka buuxa qurux qurux badan.
Dhanka kale, Zurich wuxuu caan ku yahay banki ahaantiisa – in kasta oo aad ka heli doontid naadi meesha ay wabiyaheeda ka baxdo dhismaheeda. Magaalada ayaa si joogto ah loo dejiyay 2,000 sano oo ka kooban ku dhawaad ​​shan boqol oo kun oo qof.
Ka bixitaanka tareenka waa mid isdaba joog ah oo ay ku shaqeeyaan tareeno casri ah, in kastoo aadan ku helin waqti badan oo aad ugala tashanto arintan safarka gaaban. Ku xir WiFi-ga bilaashka ah, wax yar ka baar, ka dibna waad dhamaysay – habka ugu fiican ee loo safro!
Tigidhada Zurich To Bern
Tikidhada Geneva To Bern
Tigidhada Interlaken To Bern
Tigidhada Zurich ilaa Hamburg
Iyada oo ay wadaagaan shirkado badan oo Yurub ah, waxaa kugu waajib ah inaad hesho wado aad rabto. Haddii aad raadineyso ikhtiyaariyada maxalliga ah ama aad qorsheynayso safarka transcontinental ee noloshaada oo dhan, ku dheji Save A tareenka si aad u hesho xulashooyinka tigidhada ugu fiican ee laga heli karo qiimaha ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Tilmaamaha Khariidadaha Tareenka ee Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, oo waxaad ku baddali kartaa nl to fr ama tr iyo luqado badan oo aad doorato.
EuropeTraveling eurotrip longtrainjourneys TrainRoutes tareen safarka travelinspiration tripinspiration
Carissa waa Socotada iyo sawire ah qoraa dhiga iyada nool keenaya ugu fiican ee talooyin safarka akhristayaasha iyada. Waxay reebtay ka badan 40 dalalka iyada off ilaa hadda bucketlist iyo dooneynin inuu ka joojinta. Haddii cabaya kafeega ee Napoli ama dabaal Harry Potter ee Edinburgh, iyadu mar walba farxad lagula kulmo dad cusub oo soo arag wax cusub. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Waxyaabaha Si Ogaada Marka Wadista In Europe
Safarka uga socda Paris ee taga Amsterdam By Train In 3 saacadood
Safarka tareenka, Tareen Travel Holland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe